Faritra ao Thailandy. Aiza ho aiza? ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Faritra ao Thailandy. Aiza ho aiza?
Mizara faritra dimy i Thailand, izay samy manana ny endri-javatra sasany, ao anatin'izany ny lafiny fizahan-tany.
Ny faritanin'io faritra io dia mandrakotra ny saikinosy Malacca sy ireo nosy kely faran'izay akaiky. Ny faritra afovoan'i Malaka dia rakotra tendrombohitra. Akaiky ny morontsiraka, ny terrain dia lemaka. Tsy misy fako eto fa misy torapasika izay mivelatra lavitra. Ny mponina eo an-toerana dia ahitana foko Thais sy Malay. Ny asa lehibe indrindra amin'ny mponina any ambanivohitra dia ny fambolena hazo goavambe sy voankazo tropikaly.
Tatsimo Thailand mahaliana ho an'ny mpizahatany matetika indrindra noho ny tora-pasika, izay mahatratra 3 000 km ny halavany. Betsaka ny tany mahafinaritra, fahazoana tsara, lovia matsiro (namboarina indrindra avy amin'ny hazan-dranomasina) ary hotely mampihetsi-po any amin'ireo nosy miparitaka eto.
Any atsimon'i Thailand dia tena be mpahalala amin'ny mpizahatany ny nosy Samui. Misy corals tsara tarehy miaraka amin'ny trondro. Misy torapasika 12 any Samui. Samy hafa izy ireo.
Ao amin'ny faritra atsimo ihany koa ny nosy lehibe indrindra manerana an'i Thailand - Phuket. Io no ivon-tsakafo lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Fahafahana avy amoron-dranomasina dia azo atao any amin'ny morontsiraka andrefan'i Phuket, ary avy any amin'ny nosy kely akaikin'i Koh Rach, afaka misitrika lalina ianao (hatramin'ny 30 m), raha toa ka mahatratra 40 m ny fahazoana mivoaka ny akaikin'ny seranan'i Shark Point, ny mpilatsaka dia manana fahafahana hihaona amin'ny antsantsa leoparda ary eny fa na dia mamono azy. Betsaka koa ny stingrays sy ny tondradrano morale.
Hua Hin dia iray amin'ireo toeram-pivoriana tranainy indrindra sy malaza indrindra any Thailand. Hita ao atsimon'ny firenena ihany koa izy io. Ao Hua Hin dia maro ny fampianarana golf, trano fandraisam-bahiny amin'ny fomba marisialy anglisy ary torapasika izay mirefy 5 km, rakotra fasika fotsy. Hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19 dia tany atsimo atsinanana no toerana fitsaharana maharitra ho an'ny mpanjaka. Ao Hua Hin no lapan'ny fahavaratra amin'ny mpanjaka.
Any amin'ny faritra avaratra amin'ny firenena dia misy tandavan-tendrombohitra maro. Eto, faritra tsara tarehy, renirano mikoriana miaraka amina mpihaza (azonao atao ny midina azy) sy ny ala mikitroka.
Ny firafitra ara-poko amin'ny mponina dia somary hajaitra fotsiny. Betsaka ny faritra be tendrombohitra be mponina atiny, mba hitohizany ny fomba fiainany taloha, foko samy hafa. Ny fitsangantsanganana ho an'ireo mpizahatany ho any amin'ny toeram-ponenan'ireo foko ireo dia azo vidina amin'ny trano fandraisam-bahiny any amin'ny faritra avaratr'i Thailand. Ny asa-tanana amam-pirenen'ireto teratany ireto, ny souvenir natao tamin'izy ireo dia mendrika ny hojerena.
Any avaratra Thailandy, ny tany dia mamokatra, nefa nandritra ny fotoana ela, ny mpivarotra zava-mahadomelina dia nampiasa azy io hamolavola opium. Ireo fambolena ireo dia iray amin'ireo faritra lehibe indrindra amin'ny famatsiana zava-mahadomelina amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Androany ianao dia afaka mitsidika ny tranom-bakoka opium tsy manam-paharoa.
Ny tanànan'i Pai no foiben'ny fialamboly ao amin'ny faritra avaratry ny firenena. Ao ny mpizahatany no mandamina fitsangatsanganana isan-karazany miaraka amin'ny fitsangatsanganana, dia an-tongotra elephant, fitsidihana ireo tempoly, vohitra misy foko eo an-toerana, havoana miakatra, midina amin'ny renirano tendrombohitra.
Ny tena misintona ny avaratry Thailandy dia ahitana ny tobim-pianakaviana elefanta. Ho an'ny elefanta dia misy ny fepetra rehetra ilaina. Ireo biby ireo dia arovan'ny lalàna. Ny mpitsidika tsirairay dia manana fahafahana hiresaka amin'ny elefanta. Misy aza ny kilasy elefanta mijaly ho an'ny rehetra. Ny iray amin'ireo be antitra mpitaiza be dia be dia I Mae Sa, noforonina efa 40 taona lasa izay.
Ity ampahany amin'ny Thailand ity dia hita ao amin'ny Plateau Khorat, ny haavony dia mahatratra 300 m.Ny ankamaroan'ny mponina ao an-toerana dia olona ao amin'ny Lao. Ny ilany avaratra atsinanan'ity firenena ity dia miainga avy any amin'ny reniranon'i Mekong ka hatrany Kambodza. Ny toetr'andro eto dia tsy azo antsoina hoe mahatsara ny fambolena. Matetika misy mosary sy tondradrano. Ny faritra ambanin'ny tany mamokatra eto, dia tena manify. Na eo aza izany dia mitombo betsaka amin'ny vokatra aondrana ny antsoina hoe vary jasmine.
Ara-toekarena, avaratra-atsinanana amin'ny firenena no kely indrindra miroborobo. Saika tsy mivoatra eto ny fizahan-tany faobe. Ho an'ireo mpizahatany any avaratra-atsinanana, natiora tsara tarehy, izay asehon'ny ala tropikaly sy faritra mangatsiaka amin'ny lemaka avo, ary koa ny kolontsaina mampiavaka Lao, ny asa-tanana ary ny festival azy, mety ho mahaliana.
Misy zaridainam-pirenena 2 izay mitazona faritany midadasika. Rehefa mitsidika azy ireo dia misy fahafahana hihaona amin'ny bibidia mivelona eto amin'ny toe-javatra voajanahary. Ary koa tany amin'ny faritra avaratra-atsinanana, nahita arkeolojivations maro fahiny ny mpikaroka. Ny tsangambato amin'ny fanjakan'i Khmer izay nisy hatramin'ny 802 ka hatramin'ny 1431 dia i Phamomrung sy Khin Phhimai.
Mitsidika ireo tanàna eo an-toerana, afaka mifankahalala amin'ny fiainana sy ny kolontsain'ireo mponina eo an-toerana ianao, indrindra ny mahita ny fizotran'ny famokarana landy silamo, atrikasa asa tanana ary fety nentim-paharazana, toy ny fetibe fialofana, fetibe labozia, festival ny elefanta, sns.
Ity faritra ity dia mandrakotra faritra mahafinaritra izay nofehezin'ny Chao Phraya River Delta sy ny sisin'ny Kambodziana.
Izany dia ny atsinanana azo antsoina hoe faritra manerantany indrindra any Thailand. Eto dia misy ny fanamboarana solika sy zavamaniry sy orinasa maro hafa, indrindra fa ny zavamaniry amin'ny General Motors, Mitsubishi, Ford ary ny hafa. Ireo rehetra ireo dia namboarina mba tsy handroba ny faritra fivarotana akaiky indrindra. Manara-maso akaiky ny fanarahana ny tontolo iainana.
Ny faritra fivarotana ao atsinanan'i Thailand, izay voasasa amin'ny Hoalan'i Thailand, dia ahitana ny ankamaroan'ireo vondron-dranomasina lehibe amin'ity firenena ity. Any amoron-tsiraka dia misy onitra be, bay kely, nosy kely mahafinaritra, tanàna kely fanjonoana ary, mazava ho azy, tora-pasika.
Ao atsinanan'i Thailand no be mpitia indrindra any Pattaya. Ho an'ny mpizahatany, maro ny hetsika ara-panatanjahantena azo alaina, ao anatin'izany ny karazana fanatanjahantena rano - fitsangatsanganana rano, fitsangantsanganana scuba ary maro hafa. sns Fa ny "soavaly" Pattaya dia tsy andro fa ny fialamboly amin'ny alina. Atolotra be dia be ho an'ny mpizahatany izy ireo rehefa latsaka ny haizina. Pattaya manana safidy malalaka indrindra amin'ny trano fandraisam-bahiny, misy trano fandraisam-bahiny tsara sy trano fandraisam-bahiny maoderina.
Vitsy ny resaka ara-tantara sy ny voajanahary ao atsinanan'i Thailand. Na dia misy aza, ohatra, ny zaridainan'i safari Khao Kheo. Ity dia karazana zoo lehibe iray izay hitazomana ny biby amin'ny toerana misokatra. Izy io dia mety ho an'ny fianakaviana. Eto ianao dia afaka mandamina sary fitsangatsanganana, mijery ny biby sy ny vorona mandeha an-tongotra.
Izy io dia ampahany afovoan-firenena izay azo antsoina hoe inti fototry ny fiainana maoderina Thailand. Raha ny tena izy, niforona teto ny sivilizasiona Thailand. Ny tondra-drano isan-taona, noho ny voarobak'i Bangkok dia voasaron'ny landy isan-taona, dia miantoka ny fahavokisan'ny tany eo an-toerana. Ity faritra ity dia manana ny haavon'ny mponina avo indrindra any amin'ny firenena. Ny asa lehibe ataon'ny mponina eo an-toerana dia ny fambolena voankazo sy vary.
Ao afovoan-tanànan'i Thailanda no renivohitra ao - Bangkok. Ao amin'ity tanàna lehibe ity dia afaka mahita fizaha-tantara maro ianao, indrindra ny tempoly (mihoatra ny 400) sy lapa. Ny malaza indrindra amin'izy ireo dia azo antsoina hoe tempolin'i Dawn, Buddha Emerald, Golden Hill, ary koa ny Royal Palace ary Suan Pakkad.
Tsy ny fitaomana metropolitan rehetra dia trano lehibe iray. Ohatra, any Bangkok misy zaridaina zaridaina "Tanàn-dehibe fahiny", izay manolotra modely ny miniatur modely misy tsangambato tantara malaza eo amin'ny firenena. Na eto amin'ity tanàna ity aza ianao dia afaka mitsidika ny toeram-piompiana bibilava, izay manangona sy mizara poizina bibilava amin'ny fampiasana azy amin'ny pharmacology, ary ny toeram-piompiana voay lehibe indrindra manerantany.
Marihina fa ireo toeram-pivarotana sy fialamboly maro ao Bangkok, toy ny Central World, Gayson, Peninsula, Siam Discovery ary Siam Square. Ny renivohitr'i Thailand dia iray amin'ireo ivotoerana lehibe fivarotana manerantany.
Sukhumvit no lalana lehibe indrindra ao Bangkok izay ahitana toeram-pisakafoanana maro, kafe, hotely, salon, nightclubs.
Ny faritra tsirairay any Thailandy dia mety ho mahaliana indrindra ny mpizahatany. Ny atsimo dia manintona mpankafy sy tia fiononana (marobe ny trano fandraisam-bahiny eropeana ao). Any avaratra ianao dia afaka mihaona foko sy fitaizana gadran'ny elefanta. Any avaratra avaratra, mahaliana ny valan-javaboary lehibe, izay voatahiry ny zavaboary exotic na voizina. Any atsinanana dia maro ny torapasika sy trano fandraisam-bahiny mety. Ny foibe dia tonga lafatra amin'ny fiantsenana, ary maro koa ny trano manana haitraitra lehibe.
Mazava ho azy ny firenena.
misaotra amin'ny famerenana
Ankehitriny dia azoko hoe aiza ny mihady